Madda Walaabuu Press: HAR’A MAALTU TAANAAN OPDON AFAAN BIRAA DUBBACHUU JALQABDEE?
“Eenyutu makkalaakayaan ni diigama isniin jedhee? Eenyutu sirni mootummaa Federaalaa ni diigama isiniin jedhee? Dhaabni keenya kana hin janne. Sirni mootummaa ammaa kun yoo diigame hundumaa irra kan midhamu uummata Oromooti. Sirna mootummaa kana, heera mootummaa kana kan tolche nu waan taaneef waan jijjiiramu hin jiru. Yoo tahe kan tahuu dandayu jijjiirraa kabeebsa ykn suphuu dha. Jijjiirraa kabeebsaa kanas kan goonu haaromsa gadifageenyaatti (xilq Tahaaddisoo) dhimmi bahuudhaan tah”jedhe.
Egaa hoogganni guddichi OPDO Dr. Abiy Ahmed kan harka mirgaa obbo Lammaa Magarsaa tahe waan jijjiirraa sirna mootummaa wayyaanee ilaalchisee addeessee himee jira.